Maitiro ekubvisa kushambadza (mune chero dura rewebhu) | Kubva kuLinux
Maitiro ekubvisa kushambadza (mune chero yewebhu browser)
Kune akawanda mawedzero emamwe madandemutande mabhurawuza (semuenzaniso, Adblock Plus) ayo anotendera iwe kudzivisa ma ads paunenge uchitsvaga. Kana izvo zvauri kutsvaga chiri chishandiso chinoenderana neese mabhurawuza, saka unofanirwa kuedza Privoxy.
Privoxy isiri-caching dhivha proxy ine advanced kusefa kugona kuvandudza zvakavanzika, kushandurwa kwedata kubva pamapeji ewebhu uye maHTTP misoro, kupinda kwekutonga, uye kubviswa kwezviziviso uye imwe tsvina inowanika paInternet.
Privoxy ine inochinja-chinja kumisikidzwa uye inogona kugadziridzwa kuti ienderane nezvinodiwa nemunhu uye zvinonaka. Iyo inogona kushandiswa ese ari maviri kuzvimiririra masystem uye mune akawanda-mushandisi akazvimirira netiweki.
En Debian uye zvigadzirwa:
sudo apt-tora kuisa privoxy
En CentOS / RHEL / Sayenzi Linux:
Privoxy haiwanike mune yepamutemo marekodhi. Naizvozvo, iwe unofanirwa kurodha pasuru yacho neruoko:
rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm yum kuisa privoxy -y
1.- Kutanga iyo Privoxy sevhisi
sudo /etc/init.d/privoxy kutanga
sevhisi privoxy kutanga
2.- Gadzira iyo browser rewebhu
Vhura iyo Proxy yekumisikidza tab mune yako webhu browser. Shandisa se proxy server 127.0.0.1 (ndokuti mushini wako) uye nyora 8118 mune iyo port port
Uye kuonekana nekushambadzira kweInternet. 🙂
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Maitiro ekubvisa kushambadza (mune chero yewebhu browser)
propaganda ndeyezvematongerwo enyika chete: Ehe! kushambadzira kushambadza kwezvimwe zvinhu
Zvakanakisa, ndave kutozviedza
Ini ndinowana ichi chakanaka kwazvo chinyorwa chakanyanya kunaka.
Mhoro zvakare, ndinofunga kuti chimwe chinhu chirikushaikwa, sezvo ini ndakaita zvakaratidzirwa muchinyorwa uye zvinondiudza kuti proxy iri kuramba kubatana kwese.
Ini ndinotenda ruzivo irworwo zvakanyanya, chirongwa ichi chiri kuve chinoshamisira kwazvo pamwe ne "Tor" nekuda kwenyaya yekudonhedza kwedata redu uye kufamba nemakambani makuru esoftware kumasangano ekuchengetedza uye ndiani anoziva kuti mangani mazana emamwe.
Pindura kuna alejandrodaz
Nezve izvozvi ini handisi kupinda facebook.com, uye iri peji rinoonekwa kunze kwechinyakare; Iniwo ndinoita kunge ndiri kusangana nehusimbe. Ndinoramba ndichiedza. Opera 12.15 / Crunchbang11
chikuru ndichazviedza newebhukitgtk kuburikidza prispy: D, ipapo ini ndokuudza kuti zvakafamba sei
Jakeukalane Milegum Firisse akadaro
Ini ndinoda kugadzirisa yangu / etc / hosts
Pindura Jakeukalane Milegum Firisse
zvakanakisa kugadzirisa iyo yefaira faira
Ehe, iro rakadzikira kune iro nderekuti runyorwa harugadzirise rwoga. Asi iyi sarudzo yakanakisa, kunyanya pamakomputa-mashoma ekushandisa kana kunonoka kubatana.
Icho hachisi chokwadi. RAE inoti: »Chiito kana mhedzisiro yekuita chimwe chinhu kuzivikanwa kuitira kukwezva vateveri kana vatengi."
Mune mamwe mazwi, inosanganisira iyo pfungwa yekukwezva VATENGI, kwete vateveri chete.
Une chiteshi 8188 chakavhurika here? Uri kumashure kwe firewall? Pamwe unofanirwa kutarisa kumisikidza router ... kwaziso!
Francisco Mufundisi akadaro
wakakanganisa pacman xg 4.14.16 haufanire kuzviita neruoko, ini ndinoiisa nekukanda kamwe chete, zvinondishamisa nekuti zvimisikidzwa zvekupedzisira zvataura zvakawanda nezve arch uye ikozvino havatozvitaura.
Pindura kuna Francisco Pastor
hahajjaja zvakapesana, privoxy hutachiona hunoonekwa nguva dzese uye hunoyamwa munhu wese anotarisa nzira yekubaira nayo, kwete kuiisa, mira kufongora neiyi pod ...
Pindura kuna scott
Linux Deepin: Pamwe ndiyo yakanyanya kunaka kugovera yandati ndamboona
Script yekubvisa otomatiki hutachiona kubva kune zvakabatana USB zvishandiso